Armadillo သည်စွန့်စားမှု – အုတ်တနေ့ (Armadillo Adventure – Brick Breaker)
Armadillo သည်စွန့်စားမှုအခမဲ့အဘို့အုတ်တနေ့ & ဖြိုဖျက်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါမေ့လျော့ဘုံ၏မလှုပ်မရှားချန်ပီယံလိဂ် (Idle Champions of the Forgotten Realms)
အဆိုပါမေ့လျော့ဘုံ၏မလှုပ်မရှားချန်ပီယံလိဂ်တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကထောင်ထဲ & နဂါးပျင်းရိ clicker ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ခင့်နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး 2: အင်ပါယာ Warrior (Kingdom Defense 2: Empire Warrior)
ခင့်နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး 2: အင်ပါယာသူရဲ - နတ်ဆိုး, orcs နှင့်အခြားရန်သူကျူးကျော်ထံမှအင်ပါယာကိုကာကွယ်ပေးပါသည်။
ကျောက်ခေတ် Arena (Stone Arena)
ကျောက်ခေတ် Arena အတွေ့အကြုံသစ်ကိုဖန်တီးရန်အွန်လိုင်းစစ်ပွဲကစားကွင်းနှင့်မျှော်စင်ကာကွယ်ရေးဂိမ်းထဲကအစိတ်အပိုင်းများပေါင်းစပ်တဲ့အချိန်နှင့်တပြေးညီမဟာဗျူဟာဂိမ်း (RTS) Is ။
သင့်ရဲ့ရဲတိုက်ကိုတည်ဆောက်တစ်ခုစစ်တပ်မြှင့်, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကစားသမားများဆန့်ကျင်မော်ကွန်း, ခမ်းနားသော-စကေးစစ်ပွဲများသို့သူရဲကောင်းများဦးဆောင်လမ်းပြများနှင့်နိုင်ငံတော်ကိုအုပ်စိုး!
Epic တိုက်ပွဲနှိုင်းယှဉ် (Versus Epic Battle)
နှိုင်းယှဉ်: Epic တိုက်ပွဲတစ်ရီးရဲလ်အချိန်မဟာဗျူဟာဂိမ်းဖြစ်ပါတယ် ယင်းအစဉ်အဆက်-ပြောင်းလဲနေတဲ့စစ်မြေပြင်၌, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်မဟာဗျူဟာအနိုင်ရအနိုင်ရရှိသည်။
Thrones ၏ဘုန်းအသရေ: Conquest ၏စစ်ပွဲ (Glory of Thrones: War of Conquest )
"Thrones ၏ဘုနျးတျောကို: Conquest ၏စစ်" 2018 ခုနှစ်မှာထူးခြားတဲ့ SLG ဂိမ်းပါ! ဒါဟာသင့်ရဲ့မဟာဗျူဟာကျွမ်းကျင်မှသာဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်လည်းသင့်ရဲ့ရဲတိုက်ကိုစီမံခန့်ခွဲ။
ပင်လယ်ဓားပြပုံပြင်များ: ရတနာများအတွက်တိုက်ပွဲ (Pirate Tales: Battle for Treasure)
တစ်ဦးပင်လယ်ဓားပြကပ္ပတိန်, သမုဒ္ဒရာ၏ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်, အသက်ရှင်အရှိဆုံးကွောပင်လယ်ဓားပြအဖြစ်လူသိများခံရ! ဒီစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အရေးယူဂိမ်းအတွက်ဘဏ္ဍာကိုမုဆိုးတစ်ဦးဖြစ်လာ!
သတိအန္တရာယ်နှင့်အတူတင်ဆောင်အခန်းများန်းကျင်ရွှေ့။ တပ်လှန့်နေပါနှင့်ရန်သူများကိုဖုံးကွယ်ထားစေခြင်းငှါအဘယ်အရပ်တိုင်းအစက်အပြောက်စစ်ဆေးပါ။ အထိရောက်ဆုံးနည်းပရိယာယ်အထဲက Find နှင့်အကောင်းဆုံးဂီယာနှင့်အတူတပ်ဆင်။ ကစားစရာစစ်သားကမ္ဘာ၏ငြိမ်းချမ်းရေးစောင့်ရှောက်ဖို့သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါလိမ့်မည်!